AKHRISO-Dowladda Itoobiya oo saraakiil ka shaqaynaysa dibu doorashada XSM u dirtay Muqdisho. – Radio Daljir
AKHRISO-Dowladda Itoobiya oo saraakiil ka shaqaynaysa dibu doorashada XSM u dirtay Muqdisho.
Febraayo 4, 2017 1:35 b 0
Muqdisho, Feb 04 2017-Wadanka Soomaaliya bishaan aynu ku jirno ee Febraayo 2017 waxaa kadhacaysa doorasho aad u xiisabadan oo u dhexaysa musharixiin ay wadato dowladda Itoobiya iyo musharixiin doonaya isbedel dalka kadhaca, dowladnimo iyo rabitaanka shacabka Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa hadda waxaa kusugan saraakiil Itoobiyaan ah oo ka shaqaynaya dib u doorashada madaxweynaha xilligiisii dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasi oo xogo aanu helnay ay sheegayaan inay Muqdisho joogaan in ka badan ha asbuuc.
Magacyada saraakiisha ku sugan Muqdisho
1. Reda Getachew, sarkaal ka socda xafiiska xiriirka ee RW Itoobiya.
2. Dr. Metiku Arkebe, taliyaha khaaska ah ee TW Itoobiya Haile Mariam
3. Solomon Sulu, madaxa sirdoonka dibadda ee dalka Itoobiya.
Barnaamijyada 91 Uncategorized 9732
Dhegeysiga khudbadaha musharixiinta oo ka socota magaalada Muqdisho.
Mid kamid ah musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya oo ka baxay loolanka doorashada.